10 talo si aad u noqotid naqshadeeye madaxbanaan oo wanaagsan | Abuurista khadka tooska ah
Miyaad ka fekereysaa inaad naftaada xirfad ahaan ugu hibeyso adduunka sawir ama naqshad muuqaal ah? Waa go'aan muhiim ah oo ku lug leh waxyaabo badan gudaha iyo dibedda. Maanta waxaan la kulmay sawirro taxane ah oo ka hadlaya 10 qiyam oo aad muhiim u ah si aan ugu bilaabo socodka adduunka tusaalaha. In kasta oo qayb weyn oo ka mid ah bulshada Creativos Online ay ka kooban yihiin naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah oo asal gaar ah leh, waayadan dambe asxaab cusub ayaa imanayay iyagoo doonaya inay soo galaan goobtayada.
Naqshadeeye ayaa u sameeyay sawirradan dhammaan kuwa soo galaya adduunkeenna wuxuuna kula wadaagay shabakadaha bulshada. Waxay noqotay isugudbinta fayraska. Adigana? Tilmaamahan ma ku dhaqantaa? Noosoo sheeg qaybtayada faallooyinka!
1.- Jeclow waxaad qabanayso: Tani waxay khuseysaa shaqo kasta. Haddii aad da 'yar tahay ama aad isku dayeyso inaad dib u qeexdo dariiqaaga xirfadeed oo aad ku hagto siyaabo kale, waa inaad iska caddeysaa halkaad u socoto. Ka fikir oo hubi inaad ka raadineyso sawirka, in kasta oo xeelada ugu fiican ay tahay inaad hubiso haddii aad dareento sawir fiican. Haddii aad u jeceshahay iyada oo aan loo baahnayn ujeedo kasta oo ku lug leh isla markaana raaxada weyn ee shaqadu ay kugu filan tahay inay ku dhiirrigeliso, waxay u badan tahay inay tahay habkaaga.
2. - Layli oo baro: Waa wax ay tahay inaad ku dhaqaaqdo intaad ku guda jirto xirfaddaada oo dhan, maxaa yeelay runtu waxay tahay inaadan waligaa joojin waxbarashada. Marka waxaad sifiican uqaadan kartaa koob fiican oo kafee ah waxaadnaheleysaa kursi raaxo leh. Tani hadda way bilaabatay!
3.- Kor u qaad shaqadaada: Haddii aad qabato shaqo weyn laakiin cidina aysan ogeyn inay jirto, waxay la mid noqon doontaa haddii aadan waxba qabanayn. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaad ka shaqeyso muuqaalkaaga oo aad bilowdo inaad wax yar iska sii muuqato maalin kasta. Internetku waa daaqada tooska ah ee loo abuuro xiriiro cusub iyo fursado mashruuc oo xiiso leh.
Waxaa muhiim ah inaad is taagto oo aad naftaada kor u qaado waxaad fiiro gaar ah u leedahay qorshihii hore. Waxay noqon doontaa caawimaad weyn!
4.- Xiriir wanaagsan oo aad la yeelatid macaamiishaada: Macaamiil qanacsan waa macaamil kugu soo laaban doona goor dhow ama goor dambe. Waa muhiim inaad barato sameynta xiriirro caafimaad qaba dhammaan macaamiishaada. Hubso inay ku qanacsan yihiin shaqadaada, daaweyntaada iyo soo jeedintaada.
5.- Ha cunin wax walba: Waa qalad aad u caadi ah in naqshadeeyaha-markii ugu horeysay, isku dayaya inuu daboolo wax walba oo isla markiiba. Haddii tani ay tahay kiiskaaga, ha ka welwelin, waxaad dhawaan ogaan doontaa in tani ka fog tahay inaad ku siiso sumcad wanaagsan iyo fursadaha shaqo ayaa kaliya kaa dhigi doonta inaad naftaada u riixdo si aan loo baahnayn. Waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad fiiro gaar ah u yeelato maahmaahda: Si tartiib tartiib ah iyo gacmeed wanaagsan.
6.- Is abaabula: Abaabulku waa qodob aasaasi ah. Waa inaad heshaa habka kugu habboon adiga oo baari kara hababka kuugu habboon adiga oo kaa dhigaya xirfad yaqaan wax soo saar badan. Waxaa jira qalab aan tiro lahayn oo kaa caawin kara: foomamka abaabulka, talobixinta naqshadayaasha kale, plugins, complements, applications ...
7. - Anshax: Haddii aad si cad u qeexdo ujeedooyinkaaga iyo waqtiga aad haysato, way kuu fududaan doontaa inaad abaabusho oo aad u qaybiso waqtigaaga si aad isugu dheelitirto shaqada iyo xilliyada firaaqada. Waa inaad barataa inaad ka fogaato dib u dhaca iyo warbaahinta bulshada inta lagu jiro saacadaha shaqada.
8.- Qiimee shaqadaada: Waa wax iska caadi ah ardayga dhawaan qalin jabiyay inuu hoos u dhigo shaqadiisa mararka qaarna uu aqbalo shaqooyinka iyo mashaariicda leh xaaladaha xadgudubka. Haddii aadan ka walwalin inaad qiimeyso waqtigaaga iyo dadaalkaaga, ha ka welwelin. Waa hubaal in macaamiisha ay imaan doonaan kuwaas oo kugu qasbaya inaad naftaada ku qiimeysid dalabyo laga shalaayo ... Shaqadaada iyo u heelanaantaada ayaa qiimo badan leh!
9.- Nasasho iyo cunto: Mararka qaarkood waxaan gabi ahaanba ku dhex milmaynaa mashruuc waxaanan ilaawnaa inaan wax cunno ama aan u nimaadno nolol aan caafimaad qabin. Waa inaad ogaataa inay tani kaa hor imaan doonto isla markaana goor dhow ama goor dambe waxay ku qaadan doontaa culeyskeeda heer xirfadeed iyo tan ugu muhiimsan, heer caafimaad.
10.- Badbaadso oo maal gasho: Shaqo wanaagsan ayaa sahlan in la gaaro haddii aan haysanno qalab awood leh oo awood u leh in lagu bixiyo natiijooyin tartan ah waqtiga rikoorka. Keydso oo cusbooneysii qalabkaaga!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » 10 talooyin oo loogu talagalay sawir qaadaha madaxbannaan
Toban talooyin oo wanaagsan ... Kaliya kuma eka sawirqaadeyaasha, oo ku habboon wax kasta oo weriyeyaal ah ...
Jawaab JL J Moracho
In laga fiirsado!
Daboolka xariifka ah ee Waqtiga muujinaya dhibaatada buurnida Mareykanka